Maxamed Cali-jaah - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Maxamed Yuusuf)
Maxamed Cali-jaah wuxuu ku dhashay magaalada Xarardheere ee gobolka Mudug ee dalka Soomaaliya 1dii bishii July, sanadkii 1941dii.
wuxuu ahaa raiisul wasaaraha sooomaaliya inta u dhaxeesay 8 Diseembar 2003 ilaa 3 Noofambar 2004.
Allaha u naxariistee aabihiis oo lagu magacaabi jiray Cabdi Yuusuf Cali-jaah wuxuu ku geeriyooday dagaalkii ka dhacay magaalada Muqdisho sanadkii 1949kii.
Dagaalkaas oo ahaa dagaalkii lagu magacaabi jiray Dhagaxtuur. Wuxuu ka mid ahaa halgameyaashii ururkii SYL.
Xilligaas oo uu jiray da’da 8 sano ayaa xubnihii SYL ugu deeqeen Max’ed Cabdi Yuusuf in uu wax ka barto dugsiyadii uu maamuli jiray ururkaasi ee ku yaallay magaalada Muqdisho.
dugsigaas oo la oran jiray waxbarashadii Hoose/Dhexe iyadoo dugsigii sarena dhigtay Scoula Commerciale Reggioneria Generale ee xaafadda Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho.
Sanadkii 1960kii markii ay Soomaaliya qaadatay madaxbannaanideedii ayuu shaqo ka bilaabay Wasaaradda Boostada & Isgaarsiinta, qeybteeda garoonka diyaaradaha (airport), wax yar ka dibna wuxuu ku biiray Ciidankii Xoogga Dalka Soomaaliyeed, wallow uu markii dambe isaga tagay, ka dib markii ay soo foodsaartay xaalad caafimaaddarro.
Gebogebadii inta aqoonta u leh Max’ed Cabdi Yuusuf waxay ku ammaanaan u hiillinta shacbiga Soomaaliyeed aadna u qaddariya dadkiisa, waxayna dadka Soomaaliyeed ku tilmaamaan odey Soomaaliyeed oo jecel midnimada & madaxbanaanida ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba, iyadoo muddadii ay dagaallada ka socdeen dalka Soomaaliyana uusan sameysan jabhad ama koox hubeysan ama aan isbaaro u dhigan dadkiisa si uu ku gaaro kuraasta ay u tartamayaan qabaa’ilka ku hardamaya talada dalka Soomaaliya. Reer waqooyi (somaliland) ayuu ku eedeeyey in ay wiiqeen mid nomads somalia waajibna ay tahay in awood milarari loo adeegsado. Taas oo dadbadan nebceysteen.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Maxamed_Cali-jaah&oldid=204919"
Last edited on 7 Agoosto 2020, at 13:29
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 7 Agoosto 2020, marka ee eheed 13:29.